CNC raqiis noqo warshad birta ahama iyo alaab-qeybiyeyaasha | Ouzhan
Ahama CNC jeestay processing-kartoo saxo qaybo bir jeestay ahama
Birta aan xarka lahayn ayaa sidoo kale ka kooban waxyaabo ay ka mid yihiin Ni, Ti, Mn, N, Nb, Mo, Si, iyo Cu. Qaybaha birta ahama ee birta ahama waa kuwo aad u ballaaran oo si ballaaran loogu adeegsado cuntada, kiimikada, duulista iyo dhismaha. Ka shaqaynta Lathe waa qayb ka mid ah farsamaynta farsamada. Ka shaqeynta Lathe waxay inta badan isticmaashaa qalab rogaya si ay u noqoto meertada wareegsan. Daloolinno, dib-u-fiirinno, reamerro, tuubbooyin, dhimashooyinka iyo qalabka kala-goynta ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa lathe-ka si loo helo hawl u dhigma. Lathes-ka waxaa badanaa loo isticmaalaa mashiinnada mashiinnada lagu duubo, saxannada, gacmo-gacmeedyada iyo shaqooyinka kale ee leh dusha wareega. Iyagu waa nooca ugu ballaaran ee loo isticmaalo mashiinka mashiinka lagu farsameeyo ee soo saarista mashiinnada iyo dib u hagaajinta.
Faa'iidooyinka birta birta ah ee Ouzhan loo rogay qaybo
OEM kartoo ahama steel jeestay adeegga-Shiinaha Shanghai CNC ahama qaybo jirsado ahama
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, CNC saxsanaanta sare leh ee u weeciya qaybo bir ah oo aan lahayn oo leh tayo deggan oo la isku halleyn karo waa la shaqeyn karaa. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka qumman ee qaybaha mashiinka leexinta birta birta ah. Intaa waxaa dheer, alaabada birta ah ee birta ah ee loo yaqaan 'CNC-leexday' ee la bixiyo waxay si adag ula kulmeysaa heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada warshadaha kala duwan. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan loogu talagalay birta birta ah ee birta ah ee alaabada u rogaysa macaamiisheenna qiimaha badan.
Meelaha dalabka ee qaybaha birta birta ah ee birta ah:
Warshadaha gawaarida, gawaarida, basaska, tareenada, gawaarida dhulka hoostiisa iyo qaybo kale.
Shan suuq oo suurtagal u ah birta birta ah, oo ay ku jiraan warshadaha biyaha, warshadaha dhismaha, warshadaha qalabka guryaha, warshadaha ilaalinta deegaanka, iyo xarumaha warshadaha.
Faa'iidooyinka adeegyada birta birta ah ee birta ah
- Dhammaan saxnaanta CNC waxay u rogtay alaabada birta ahama waxay ku xiran tahay baaritaanno tayo leh oo adag.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro si loo soo saaro saxnaanta birta birta ah ee leexashada.
Hore: Ridaya daawaha aluminium shubay dhinta
Xiga: Qalabka Gawaarida Gawaarida Gaaban ee Khaaska ah
Kaarboonka farsamaysan ee birta loo beddelo qayb ka mid ah ...